Uchwepheshe we-Semalt Uqala Ithuluzi Lokudatshulwa Kwedatha
Kubalulekile ukwazi ukuthi kuningi ukuchofoza kuthatha ukuskena noma ukususa iwebhu ehlukile amakhasi. Nge-SimpleIndex, awukwazi ukukhipha idatha kuphela kodwa uphinde uskena amakhasi akho wewebhu bese uyawagwaza, uthuthukise ukusebenza jikelele kwesayithi lakho. I-SimpleIndex iyihlelo elisha elisha kodwa elimangalisayo futhi eliguquguqukayo lokukhipha idatha. Inani elihle kakhulu livela ngezikhathi zokuhlanganiswa, intengo yokulinganisa, nezindleko zokusekela. Izici ze-SimpleIndex zihlangene nokukhonjiswa okukodwa komsebenzisi-friendly kanye nezindleko zesaphulelo.
Ezinye zezinzuzo zayo eziyinhloko zichazwe ngezansi - umzug an was muss ich denken.
1. Ukuhlinzeka ngemali enkulu yedatha
SimpleIndex ingenye yalezi amathuluzi wokuhlunga idatha anikezela ngemali eningi yedatha, ukuqinisekisa izinga layo nokuyihlela ngokuvumelana nezidingo zakho. Akumangalisi ukuthi kunesidingo esiphuthumayo sedatha ekhonjiwe yebhizinisi, amabhizinisi kanye nemikhiqizo ye-intanethi. Yingakho ithuluzi elifana ne-SimpleIndex linganikeza ulwazi oluningi futhi lukhuphuke ngezinto okulindele. Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi kufanele ukhiphe idatha kusuka ku-eBay namathuluzi afana ne-Amazon noma usuzofaka imvelo yezokuncintisana, kufanele uzame leli thuluzi futhi uqiniseke ngokuqashelwa komkhiqizo wakho ezinsukwini ezimbalwa.
2. Akukho ukuyekethisa kwekhwalithi
Kunenamba enkulu yezinhlelo zokwehlisa idatha, ukufeza izidingo zakho ngendlela engcono. Ezinye zazo ziyi-freeware ezinokukhethwa okulinganiselwe kanti ezinye zithengwa futhi azihambisani nokuqala. Ngokuphambene, i-SimpleIndex iklanyelwe ukuqoqa idatha kusuka kumasayithi amabili alula futhi acebile. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi leli thuluzi ngeke likukhokhele kakhulu. Kusho ukuthi ungazuza kulolu hlelo lokukhipha idatha njengokuqala futhi ungakhula ibhizinisi lakho le-inthanethi kalula, ngaphandle kokuyekethisa kwikhwalithi.
3. Kuhle ukucwaninga kwamakethe
Izinto ezintsha nezintandokazi zisenza sibone isithombe esiphezulu sembonini yethu. I-SimpleIndex, ekubeni uhlelo lokusebenza olusha lwe-scraping application, lunezici eziningi ezingavamile futhi lwenza ucwaningo lwakho lwemakethe lube lula. Ngenye yezindlela ezingcono kakhulu zamabhizinisi angaphumelelanga nezinkampani ezintsha, futhi usize ukubikezela izitayela ezahlukene.
4. Ulwazi olubuyekeziwe
SimpleIndex yilona ithuluzi kuphela elithembisa ukuhlinzekwa kokubuyekezwa kanye nedatha ewusizo. Ezinye zezinsiza zokuqamba idatha azihlinzeki ngemiphumela oyifunayo. Bahlela idatha kumafomethi angafundiwe noma kunzima ukubhekana nayo. Kodwa i-SimpleIndex uhlelo olubanzi oluzofeza izidingo zakho zokuhlunga idatha futhi luzohlinzeka ngolwazi olunembile nolweqiniso kuphela.
5. Ukuhlolwa kwebhizinisi kwe-intelligence
Awukwazi ukugcizelela ukubaluleka kokuhlaziya nokuhlola ibhizinisi. Kubalulekile ukuba noma ubani athole ulwazi olusha ngaso sonke isikhathi. Kodwa nge-SimpleIndex, angeke nje uqaphele ikhwalithi yedatha yakho ekhishwe kodwa futhi uqhubeke nokuhlolwa kwebhizinisi ngaphandle kwezinkinga. Ungahlola futhi ukuthi izincintiswano zakho ziye zabeka kanjani amagama akhe angukhiye nokuthi yiluphi uhlobo lwedatha abasebenzisa ukukhulisa ibhizinisi.
Ukuzihlanganisa, kuwukuthi yikuphi uhlelo lokuhlunga kwedatha oyikhethayo. Kodwa uma kuziwa ekuqaliseni umkhiqizo nokulondoloza inhlangano yokuncintisana, kufanele ukhethe i-SimpleIndex noma enye idatha efana ne-scraper.